Re Sharciga Soo Noolaynta Makhaayada - Amjambo Africa
Maxay Tahay Fund Sanduuqa Soo Noolaynta Makhaayadaha (RFF) wuxuu qayb ka yahay Sharciga Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka. Waxaa la saxiixay Sharciga bishii Maarso 11, 2021, ficilku wuxuu qoondeeyay $ 28.8 Billion oo doolar si loogu taageero martigelinta u qalma iyo ganacsiyada warshadaha adeegga cuntada ee uu saameeyay aafada. RFF waxaa maamula Maamulka Ganacsiga Yaryar (SBA.) SBA waxaa laga yaabaa inay bixiso abaalmarin u dhaxeysa $ 1,000 ilaa $ 5 milyan doolar halkii codsade ganacsi, ama ilaa $ 10 milyan wadarta codsade kasta. RFF way sii shaqeyn doontaa ilaa sanduuqa ayaa lacagta ka dhammaatay. Abaal Marinta waa in lagu bixiyaa Maarso 11, 2023 kharashyada soo xarooday intii u dhaxeysay Febraayo 15, 2020 iyo Maarso 11, 2023 Lacagaha aan la isticmaalin waxaa dib loogu celin doonaa dowladda Mareykank.
Restaurants Makhaayadaha badankood, baararka, rootiga, rootiga, cuntada, gawaarida cuntada ama istaagga, brewpubs, distilleries, ama guryaha gaarka loo leeyahay ee leh iibka cuntada ee goobta ayaa xaq u leh inay codsadaan. Codsadeyaashu waa inay ka mid noqdaan qaybaha cashuuraha ee soo socda si ay ugu qalmaan.
C-Corporations ama S-Corporations
· Shirkadaha Mas’uuliyadaha Xaddidan (oo ay ku jiraan canshuuraha sida shirkadaha S-ga iyo Mulkiileyaasha Kaligood ah)
· Mulkiileyaasha Kalidaa
· Shakhsiyaadka Iski U Shaqeeya
· Qandaraaslayaal Madax-bannaan
Dhammaan codsadeyaashu waa inay caddeeyaan hubin la’aanta dhaqaale ee hadda jirta inay ka dhigayso codsiga maalgelinta mid lagama maarmaan u ah taageeridda howlaha socda ama la filayo.
Yaan u qalmin?
RFF waxaa loola jeedaa inay caawiso ganacsiyada yaryar, ganacsiyada qoyska, iyo ganacsatada. Haddii codsaduhu yahay.
Mehrad ganacsi oo Dawlad ama degmada mamushi.
Mulkiile ama hawlwadeen ka badan 20 goobood oo ganacsi, warshado kasta
Shirkada Ganacsi Dadweyne Ka Ganacsada;
amarrada guriga); organization Urur aan macaash doon ahayn.
Markaa codsaduhu xaq uma laha inuu ku maalgeliyo RFF. U-qalmayaasha kale waxaa ka mid ah diiwaangelin hore loo ansixiyay ee musalufka cutubka 7aad, ama cutubka 11, 12 ama 13 musalafnimo ee aan ku shaqeynin qorshaha dib-u-bixinta la oggolaaday. Si kastaba ha noqotee, codsadayaasha barnaamijka musalafnimada ee dhammaystiraya qorshaha la oggolaaday ee dib u habeynta waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan RFF.
Abaalmarinta RRF waxaa lagu bixin karaa mid ka mid ah kharashyada soo socda ee muhiim u ah socodsiinta ganacsi yar. Kuwaas waxaa ka mid ah roll · Mushahar bixinta, sahayda meheradaha, kharashaadka cuntada iyo cabitaanka, adeegyada iyo kharashyada hawlgalka costs · Kharashyada dhismaha ee la xiriira dayactirka bannaanka ama adeegga fog ee bulshada.
· Bixinta wixii deyn ah ee ku soo kordhay.
Kharashaadka aan u qalmin waxaa ka mid ah
· Kharashaadka balaarinta
· Lacag bixinta maamulaha debedda oo la aruuriyay ka hor faafida xanuunka looyaqano(Covid-19)
Sidee maalgalinta hore ee PPP aya sameyn ugu yeelaneysaa abaal marinta?
Ganacsiyada helay amaahda Qorshaha Badbaadinta Lacagta ee sanadka 2020 ayaa laga jari doonaa qaddarka amaahda abaalmarintooda ugu dambeysa iyada oo loo marayo RRF. Codsadeyaasha waxaa lagu xaqiijin doonaa iyadoo la adeegsanayo EIN (Lambarka Aqoonsiga Shaqaaleeyaha) ee loo isticmaalay arjiga PPP. Su’aalaha waxaa lagu hagaajin karaa SBA-da Maine.
Direct Si toos ah iyada oo loo marayo SBA Platform ee makhaayadaha.sba.gov Through · Iyadoo loo marayo iibiyaha Goobta-Iibinta (waa kuwee dadkani?)
· Taleefanka oo ah (844) 279-8898
· Codsiyada telephonicku waxay lahaan doonaan waqtiyo shaqo oo dheeri ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo caawin ah
Booqo SBA khadka tooska ah wixii macluumaad dheeraad ah // https//www.sba.gov/funding-program/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fun
PreviousDiyaar Garow Intaadan Dalbalin Amaah Ganacsi
NextCredit Credit Deynta Canshuurta Haysta Shaqaalaha